Home News Midowga Afrika oo sheegay in Dowladda Soomaaliya lagu la xisaabtami doono xiristii...
Midowga Afrika oo sheegay in Dowladda Soomaaliya lagu la xisaabtami doono xiristii Muqtaar Roobow
War qoraal ah oo kasoo baxay xafiiska ergayga gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya ayaa looga hadlay xiisada siyaasadeed ee kasoo cusboonaatay Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Waxaana walaac xoogan loogu muuiiyay xiisada ka dhalatay soo xiritaanka Muklhtaar Rooboow Abuu Mansuur oo ay dowladda dhexe ee Saoomaaliya ay sheegtay in iyadu ay soo xirtay.
Waxaana uu u qornaa warka kasoo baxay xafiiska xafiiska ergayga gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Fransiisco Madaire sida tan.
“Waxaan il gaar ah ku haynay xiisada siyaasadeed ee ka taagan KGS iyo soo xiritaankii Mukhtaar Rooboow.
Waxaan ka xunahay dadka ku dhintay xiisada ka taagan baydhabo waxana rajaynaynaa in dad kale aynan kusii dhiman” ayaa ugu dambeyntii lagu sheegay warka kasoo baxay xafiiska ergayga gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya.
Previous articleXaalada amni ee Magaalada Baydhabo oo saakay dagan
Next articleXeebaha Soomaaliya oo hub laga qabtay
Madaxwayne Deni oo wakiil u magacaawday Dalka Sweden
Wararkii Ugu Dambeeyay Dagaal ka dhacay Muqdisho!!